Cabdalla Xusseen Nuur | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Cabdalla Xusseen Nuur, March 16, 2020
Seef la boodnimada waxaa lagu macneeyaa in laga gudbo raxmadda, caddaaladda, iyo maqaasidda shareecada iyo fidrada aadaminimo iyadoo la sheeganayo jihaad iyo diin u dirir. Sida la wada ogyahay mushkilad walba marka la rabo in si dhab ah loo diraaseeyo waxaa lagama maarmaan ah in la isdul taago sababaha keenay mushkiladdaasi, haddaba seef laboodnimada oo ah mushkilad Soomaali dhib badan u gaysatay waa muhiinm in la ogaado sababaha keenay iyo sida lagu dawayn karo. Marka hore waxaan qaadaa dhigaynaa sababaha dadban iyo kuwa tooska ah ee keena seef laboodnimada. Sababaha dadban: Caburinta iyo ku tumashada xuquuqda sida in la xiro …
Ma saxbaa oraahda ah: “siyaasada guud ahaan iyo xiriirka dowladaha gaar ahaan in ayna ku dhisneyn diin iyo akhlaaq balse ay ku qotomaan maslaxad iyo wax is weysaarsi.” Marka hore oraahdan laba wajiba waa lagu fasiri karaa iyadoo hadba qofka adeegsanayo oraahda la eegayo: 1- waxaa lagu fasiri karaa in loola jeedo sidan: diintu wax shaqo ah kuma lahan majaalkan ee waa nin iyo dantiis. 2- waxaa kaloo ay ka dhignaan kartaa sidan: diinta sida ay arrimaha cibaadadaadka ay wax walba ugu jaan goysay iyagoo tafatiran haday tahay sida loo tukanayo goorta la tukanaayo Waxa la akhrinaayo ama sida loo …
Waxaa xaqiiqo biyo kama dhibcaan ah in noloshan aduunyo aanay marnaba ka marnayn waxyaabo cakira nolosha, waxaana mustaxiil ah in la helo nolol ka maran arrimahaasi, si kasta oo cilmi, hanti, caafimaad, iyo owlaad aad u haysato. Mar haddii ay sidaasi tahay waxaa lama huraan ah inaad is xijiso si aad ula lagdanto ood isaga dhiciso nolosha. Qofka muslimka ah wuxuu kaga duwan yahay qofka kale innuu si qotodheer u aaminsanyahay xukunka iyo qadarta Alle oo ka mid ah lixda tiir ee iimaanka taasoo ku bixinaysa inuu u gegsado waxa uu kala kulmayo nolosha maadaamaa uu rumeysan yahay in waxa …